Wararka - SHOW MUUQAALKA EYEWEAR
LOFT eyewear Shows ayaa ah munaasabadaha ugu horreeya ee madaxbanaan ee indhoolayaasha indhaha lagu qabto sanad kasta magaalada New York, Las Vegas iyo hadda San Francisco Laga soo bilaabo 2000, dhacdooyinka LOFT waxay soo bandhigeen naqshadayaasha ugu khaaska ah uguna yareeya adduunka.
Waxaan nahay koox isku fikrad ah, nashqadeeyayaal madaxbannaan oo wadaaga hammuun abuurista muuqaal qurxoon, marna xiise leh, marna indho-indheyn caadi ah oo loogu talagalay macaamilka caqliga badan. Waxaan aaminsanahay in looxyadeenna ay ahaadaan kuwo qaabeeysan oo ay ku habboon yihiin tafaariiqleyaasha madaxa bannaan ee indha sarcaadka ku takhasusay ee ku xeel-dheer indha-sarcaadkeenna daawooyinka iyo baahida wajiga ee isticmaalaha ugu dambeeya
Qaababkeena kaladuwan ee loo qaabeeyo kaliya waxay xoojinayaan aragtideena guud si kor loogu qaado qurxinta indha-indheynta laakiin sidoo kale, tan ugu muhiimsan, in la baashaalo. Uruurintayada madaxbannaan waxay ka soo jeedaan Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga, Danmark, Jarmalka, Austria iyo Switzerland.
Meel isku imaatin oo ka mid ah dadka indha indheeyaasha indhaha jecel. Noocyada u dhexeeya Kirk & Kirk, Anne Et Valentin, Blake Kuwahara, Salt ka dibna qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad galab galab ku hoos qaadato hal saqaf oo aad aragto dhowr nooc oo ka qaybqaadanaya maskaxda maskaxda fikradaha iyo khibradaha. Xitaa waad qaadan kartaa nasasho si aad uga soo qaadato aragtida dusha saqafka iyo neefta ka hor intaadan garaacin dabaqa bandhigga.
Loft waa fikrad fantastik ah oo guursata dukaamada tafaariiqda ugu fiican iyo noocyada madaxbannaan. Waa jawi kobciya isku xirnaanta iyo hal-abuurka bulshada indha-sarcaadka raaxada leh. Waxaan had iyo jeer rajeynayaa inaan arko naqshadaha cusub ee ka imanaya naqshadayaashaan gaarka ah iyo kuwa hal-abuurka leh.
Loft waa goobta ugu fiican… dhamaan iibiyeyaasha dhamaadka sare isku meel, jawi aad u fiican waxaadna ku arkeysaa dhamaan asxaabtaada hal meel. Waad fadhiisan kartaa oo qadeyn kartaa oo aad la kulmi kartaa asxaab isku aragti ah oo ka kala yimid daafaha dalka… dareen aad isugu dhow oo hubaal ah.
“… Aniga ahaan waxay ila tahay caqli gal in la sahmiyo waddo ka duwan kuwa kale”